Jenesis 5 | Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl | Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ (2007)
5 Nke a bụ akwụkwọ nke kọrọ akụkọ Adam. N’ụbọchị Chineke kere Adam, o mere ya n’oyiyi Chineke.+ 2 Nwoke na nwaanyị ka o kere+ ha. E mesịa, ọ gọziri ha ma kpọọ ha Mmadụ+ n’ụbọchị e kere+ ha. 3 Adam dịrị ndụ otu narị afọ na iri atọ. O wee mụọ nwa nwoke n’oyiyi ya, n’onyinyo ya, ma gụọ ya Set.+ 4 Ụbọchị Adam dịrị ndụ, mgbe ọ mụsịrị Set, dị narị afọ asatọ. N’ime oge ahụ, ọ mụrụ ụmụ ndị ikom na ụmụ ndị inyom.+ 5 Ụbọchị niile Adam dịrị ndụ wee bụrụ narị afọ itoolu na iri atọ, o wee nwụọ.+ 6 Set dịrị ndụ otu narị afọ na ise. O wee mụọ Inọsh.+ 7 Mgbe Set mụsịrị Inọsh, ọ dịrị ndụ ruo narị afọ asatọ na asaa. N’ime oge ahụ, ọ mụrụ ụmụ ndị ikom na ụmụ ndị inyom. 8 Ụbọchị niile Set dịrị ndụ wee bụrụ narị afọ itoolu na iri na abụọ, o wee nwụọ. 9 Inọsh dịrị ndụ afọ iri itoolu. O wee mụọ Kinan.+ 10 Mgbe Inọsh mụsịrị Kinan, ọ dịrị ndụ narị afọ asatọ na iri na ise. N’ime oge ahụ, ọ mụrụ ụmụ ndị ikom na ụmụ ndị inyom. 11 Ụbọchị niile Inọsh dịrị ndụ wee bụrụ narị afọ itoolu na ise, o wee nwụọ. 12 Kinan dịrị ndụ afọ iri asaa. O wee mụọ Mahalalel.+ 13 Mgbe Kinan mụsịrị Mahalalel, ọ dịrị ndụ narị afọ asatọ na iri anọ. N’ime oge ahụ, ọ mụrụ ụmụ ndị ikom na ụmụ ndị inyom. 14 Ụbọchị niile Kinan dịrị ndụ wee bụrụ narị afọ itoolu na iri, o wee nwụọ. 15 Mahalalel dịrị ndụ ruo afọ iri isii na ise. O wee mụọ Jered.+ 16 Mgbe Mahalalel mụsịrị Jered, ọ dịrị ndụ narị afọ asatọ na iri atọ. N’ime oge ahụ, ọ mụrụ ụmụ ndị ikom na ụmụ ndị inyom. 17 Ụbọchị niile Mahalalel dịrị ndụ wee bụrụ narị afọ asatọ na iri itoolu na ise, o wee nwụọ. 18 Jered dịrị ndụ otu narị afọ na iri isii na abụọ. O wee mụọ Inọk.+ 19 Mgbe Jered mụsịrị Inọk, ọ dịrị ndụ narị afọ asatọ. N’ime oge ahụ, ọ mụrụ ụmụ ndị ikom na ụmụ ndị inyom. 20 Ụbọchị niile Jered dịrị ndụ wee bụrụ narị afọ itoolu na iri isii na abụọ, o wee nwụọ. 21 Inọk dịrị ndụ afọ iri isii na ise. O wee mụọ Metusela.+ 22 Mgbe Inọk mụsịrị Metusela, o soro ezi Chineke na-eje ije ruo narị afọ atọ. N’ime oge ahụ, ọ mụrụ ụmụ ndị ikom na ụmụ ndị inyom. 23 Ụbọchị niile Inọk dịrị ndụ wee bụrụ narị afọ atọ na iri isii na ise. 24 Inọk wee soro ezi Chineke+ na-eje ije.+ Ma ọ nọkwaghị, n’ihi na Chineke kpọpụrụ+ ya. 25 Metusela dịrị ndụ otu narị afọ na iri asatọ na asaa. O wee mụọ Lemek.+ 26 Mgbe Metusela mụsịrị Lemek, ọ dịrị ndụ narị afọ asaa na iri asatọ na abụọ. N’ime oge ahụ, ọ mụrụ ụmụ ndị ikom na ụmụ ndị inyom. 27 Ụbọchị niile Metusela dịrị ndụ wee bụrụ narị afọ itoolu na iri isii na itoolu, o wee nwụọ. 28 Lemek dịrị ndụ otu narị afọ na iri asatọ na abụọ. O wee mụọ nwa nwoke. 29 O wee gụọ ya Noa,+ sị: “Onye a ga-ewetara anyị nkasi obi n’ọrụ anyị nakwa ná ndọgbu anyị na-adọgbu onwe anyị n’ọrụ n’ihi ọnụ Jehova bụrụ ala.”+ 30 Mgbe Lemek mụsịrị Noa, ọ dịrị ndụ narị afọ ise na iri itoolu na ise. N’ime oge ahụ, ọ mụrụ ụmụ ndị ikom na ụmụ ndị inyom. 31 Ụbọchị niile Lemek dịrị ndụ wee bụrụ narị afọ asaa na iri asaa na asaa, o wee nwụọ. 32 Noa gbara narị afọ ise. E mesịa, Noa mụrụ Shem,+ Ham+ na Jefet.+